मन्त्रीकै कार्यकक्षमा कुटिए पिए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। मन्त्रीलाई भेटन नदिएको भन्दै सिंहदरवारभित्र मन्त्रीकै कार्यकक्षमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवले निर्घात कुटाइ खाएका छन। लामो समयसम्म कुर्दा पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई भेट्न समय नमिलाइदिएको भन्दै मन्त्रीका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले नै कुटपिट गरेका थिए।
गृह मन्त्रालयमा भेटघाट गर्न भन्दै नेकपाका पाँच जना द्धन्द्ध पीडित कार्यकर्ताहरुले गेटबाट पास लिएर सिंहदरवार प्रवेश गरेका थिए। लामो समयसम्म कुर्दा पनि भेट्न पालो नआएपछि नेकपाका कार्यकर्ताहरुले समय मिलाइदिन स्वकीय सचिव विष्टलाई दबाब दिएका थिए।
स्वकीय सचिव विष्टले मन्त्रीज्यू व्यस्त रहेको भन्दै ती कार्यकर्तालाई अलमल्याउन खोजेका थिए। लामो समय कुर्दा पनि समय नपाएपछि भेट्ने पालो कुरेर बसेका कार्यकर्ताहरुले आफ्नै पार्टीको मन्त्रीलाई पनि भेट्न नपाउने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै कुटपिट गरेको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए।
ती प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार साँझ ६ बजेसम्म पनि भेट्न पाउने/नपाउने विषयमा भनाभन भएपछि दुई जना कार्यकर्ताले स्वकीय सचिव विष्टमाथि कुटपिट गरेका थिए।
विष्टमाथि पार्टीकै कार्यकर्ताहरुले हातपात गरेपछि सचिवालयमा रहेका कर्मचारीले महानगरीय सुरक्षा प्रहरी गणमा खबर गरेका थिए। साझ ६ बजे घटना भएलगत्तै पुगेको प्रहरीले पाँच जनालाई नै पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार विष्टको नाकमाथिको भागमा चोट लागेको छ । विष्टलाई उपचार गर्न मेडिकल लगिएको थियो । महानगरीय सुरक्षा प्रहरी गणले पक्राउ गरेर आइतवार नै पाँच जना नेकपाका कार्यकर्तालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारमा पठाएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार विष्टमाथि हातपात गर्ने नेकपाका कार्यकर्ताहरु शसस्त्र द्धन्द्धमा अगंभंग भएकाहरु रहेका थिए । मन्त्री यादवका सचिवालयले केही समय अघि ८ बोरा चामल उपलब्ध गराएको दावी गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले केही साथीहरुले उदण्ड व्यवहार देखाएको बताए। ‘स्वकीय सचिव विष्टको दोष छैन, भेट्न आउने साथीहरुको व्यवहार ठिक भएन’उनले भने।